Djibouti: Afduubka dadka la tuhmo - BBC News Somali
Djibouti: Afduubka dadka la tuhmo
22 Abriil 2015
Ururo aan dowli aheyn ayaa ku eedeeyay Djibouti inay ku lug leeyihiin afduubka dad la tuhmay. Waxay sheegayaan in lix ruux lagu xiray laguna jirdilay Djibouti ka hor intii aan loo gudbin xabsiyada Mareykanka ee Afganaistan iyo Guantanamo Bay.
Ururada oo kala ah isutagga cadaaladda, Haki Africa iyo guddiga caalamiga qareenada ayaa baaray door la sheegay in Djibouti ay ku laheyd muddadii Mareykanka ay dowladuhu dadka la tuhmay u afduubeen ee u dhexeysay 2001 iyo 2008, xilligaasi uu jiray dagaalka argagixisada ee maamulkii Bush.
Warbixintooda ayey ku sheegeen in Djibouti ay si qarsoodi ah u xireen ugu yaran lix ruux oo loo diiday in wax xiriir ah ay cid kale la sameeyaan iyagoo la jirdilay, si liidatana loola dhaqmay.
Dhibanayaasha ayaa la sheegay inay ahaayeen dad ka yimid Somaliland, Kenya, Tanzania iyo Yemen.
Warbixinta oo lagu sheegay in maxaabiista loo diiday inay la xiriiraan qareenada ayaa ku eedeyneysa Djibouti inay u ogolaatay sirdoonka shisheeyaha inay su'aalo weydiiyaan maxaabiista taas oo jabineysa qeynuuka caalamiga.
Warbixinta ayaa ugu baaqday guddiga xuquuqda aadanha ee Africa inay wadahadal la yeesheen Djibouti oo lagu go'aansanayo inta xadgudubka uu la egyahay. Waxayna ku adkeysay dalkaasi inuu soo bandhigo magacyada dhibanayaasha iyo halka ay ku dambeeyeen, waxayna ugu baaqeen inay raaligelin ka bixiso, magdhawna siiso kuwa loo geystay dhibka si loo xaqiijiyo in dacdaradaasi aysan markale dhicin.